Shir ka dhacay magaaladi Biki oo noqotay degma cusub oo magac Bixin ku Haboon loo waayey – Xeernews24
Shir ka dhacay magaaladi Biki oo noqotay degma cusub oo magac Bixin ku Haboon loo waayey
21. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
khamiis 20ka October 2016. Shir balaadhan oo ay kasoo qaybgaleen dhamaan bulshada qaybaheeda kaladuwan islamarkaana ku saabsanaa sii xoojinta hawlaha horumarka nabadgalyada iyo maamulka suuban ayaa kaqabsoomay degmada Gootabiki ee Gobolka Siti.
Hadaba, shirkan ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Siti mudane Cabdishakuur Aadan Faarax oo sheegay in shirkani yahay mid larabo in lagu kalaqaato jahooyin horumarineed islamarkaana ku qotama kajawaabida baahida shacabka. Wuxuuna gudoomiye kuxigeenka xusay in maanta uu gobolka siti uu maryo meel aad ufiican islamarkaana si balaadhan looga faa’iidaystay horumarka baaxada wayn ee deegaanka ka socda islamrkaana bulshada degmada biki larabo in ay sifiican uga qaybqaataan.
Sidookale, waxaa isna dhankiisa kahadlay Gudoomiyaha Degmada Goota-Biki Axmed Maxamed Cabdulaahi oo sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in shirkani kaqabsoomo. Wuxuuna intaa kudaray in bulshada reer biki iyo maamulkuba ay si daacad ah uga wada shaqeeyaan horumarka, Nabadgalyada iyo maamulka suuban, ee kahanaqaaday dhamaan deegaanka, maadaama oo siwada jir ah in looga shaqeeyo ay lagama maarmaan tahay.
Wuxuuna tilmaamay in dhankooda ka maamul ahaan ay rajaynayaan in ay doorkooda kasoobaxayaan iyagana lagarabo in ay doorkooda kaqaataan.
Ugudanbayna waxaa iyana dhankooda kahadlay qaarkamid ah bulshadii kasooqayb gashay shirka oo sheegay in ay siii xoojinayaan wada shaqaynta maamulka iyo ka shaqaynta horumarka, nabadgalyada iyo maamulkasuuban.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/Goota.jpg 340 605 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-21 18:06:052016-10-21 18:28:17Shir ka dhacay magaaladi Biki oo noqotay degma cusub oo magac Bixin ku Haboon loo waayey
Mid kamid ah Dowladaha Afrika ugu awooda badan oo ah Koonfur Afrika ayaa isaga... Faah-Faahino ka soo Baxaya iska Horimaad Qasaaree geeystay oo galabta ka dhacay...